नेकपा दुर्घटनाको संघारमा। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
नेकपा दुर्घटनाको संघारमा।
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, साउन १४, २०७७ ४:५६:३४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी भित्रैबाट नैतिक संकटमा फसेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीलाई ठाडो चुनौती दिँदै उनी विरुद्ध बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेपछि नैतिक संकटमा परेका प्रधानमन्त्री साँझ भैंसेपाटीस्थित वामदेव निवासमा पुगे ।
मंगलबार बिहान ११ बजे आयोजित स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफू त सहभागी भएनन् नै, आफ्नो समूहका १४ नेताहरुलाई गयब हुन निर्देशन दिए । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २९ जनामात्रै सहभागी भएर बैठक बस्यो ।
बिहान ११ बज्न केहीबेर मात्र बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा बैठक स्थगनको सूचना प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । बैठक स्थगित भएको सूचना पाएर बाटैबाट घर फर्किएका केही नेताहरु पछि फेरि बालुवाटारमा आए र बैठकमा सहभागी भए ।
‘ओलीले एकपक्षीय रुपमा बैठक स्थगित गर्नु अनुचित’